Umthetho Wezikweletu | Law & More BV
Umthetho wezikweletu » Izimangalo ngomonakalo
Isisekelo esiyisisekelo siyasebenza emthethweni wesinxephezelo waseDashi: wonke umuntu uthwala owakhe umonakalo. Kwezinye izimo, vele akekho onecala. Isibonelo, cabanga ngomonakalo ngenxa yesichotho esinamandla. Ngabe ukulimala kwakho kwabangelwa othile? Kuleso simo, kungenzeka kuphela ukunxephezela umonakalo uma kunesisekelo sokubamba lowo muntu icala.
NGABE UTHATHA ISIKHALAZO SAMADAMU
Isisekelo esiyisisekelo siyasebenza emthethweni wokunxeshezelwa waseDashi: wonke umuntu uthwala owakhe umonakalo. Kwezinye izimo, vele akekho onecala. Isibonelo, cabanga ngomonakalo ngenxa yesichotho esinamandla. Ngabe ukulimala kwakho kwabangelwa othile? Kuleso simo, kungenzeka kuphela ukunxephezela umonakalo uma kunesisekelo sokubamba lowo muntu icala. Izimiso ezimbili zingahlukaniswa emthethweni wamaDashi: isikweletu senkontileka nesemthethweni.
> I-liabilit yenkontileka
> Isikweletu esisemthethweni
> Izinhlobo zomonakalo
> Isinxephezelo esigcwele ngomonakalo sihlupheke ngempela
> Umshuwalense ngokumelene nomonakalo
> Isenzo seklasi
Ngabe amaqembu angena esivumelwaneni? Ngemuva kwalokho akuyona inhloso kuphela, kodwa futhi yisibopho sokuthi izivumelwano ezenziwe lapho kufanele zigcwaliswe yizo zombili izinhlaka. Uma iqembu lingazifezi izibopho zalo ngaphansi kwenkontileka, kukhona ukwehluleka. Isibonelo, cabanga ngesimo lapho umphakeli engalethi izimpahla, azikhulule sekwedlule noma esesimweni esibi.
Kodwa-ke, ukushiyeka kuphela okungakakunikizi isinxephezelo. Lokhu kuyadingeka ukuphendula. Ukuziphendulela kulawulwa ku-Article 6:75 ye-Dutch Civil Code. Lokhu kucacisa ukuthi ukwehluleka kungeke kuvezwe kolunye uhlangothi uma kungengenxa yephutha lakhe, futhi akungenxa ye-akhawunti yomthetho, isenzo somthetho noma ukubuka okukhona. Lokhu kuyasebenza ezimweni zokuphoqelelwa ngamandla.
Ingabe kukhona ukushiyeka futhi futhi kuyimpilo? Uma kunjalo, umonakalo odalekile okwamanje awuzukufunwa ngokuqondile kwelinye iqembu. Imvamisa, isaziso sokuzenzakalelayo kumele sithunyelwe kuqala ukuze sinikeze elinye iqembu ithuba lokufeza izibopho zalo kuze kube futhi ngesikhathi esifanele. Uma elinye iqembu lisahluleka ukufeza izibopho zalo, lokhu kuzophumela ekuzenzakalelayo futhi kunxeshezelwe nakho kungabangwa.
Law & More futhi angakwenza lokhu kuwe
Ngabe akekho umuntu ogcina ama-aphoyintimenti akhe? Singathumela izikhumbuzi ezibhaliwe bese silungiselela wena
Ukudweba isivumelwano kubandakanya umsebenzi omkhulu. Ngakho-ke cela usizo lwe
Ungathanda ukuxhaswa lapho wenza inkontileka yomsebenzi? Fonela Law & More
Kunezimo eziningi lapho umthetho wesibopho udlala indima
Ngaphezu kwalokho, isikweletu seqembu lesinye ngeke sithathwe kalula, ngokubheka umgomo wenkululeko yesivumelwano. Ngemuva kwakho konke, amaqembu eNetherlands anenkululeko enkulu yesivumelwano. Lokhu kusho ukuthi amaqembu angenayo inkontileka nawo akhululekile ukukhipha ukuzibophezela okuthile okusindisayo. Lokhu kuvame ukwenziwa esivumelwaneni ngokwaso noma ngokwemibandela nemibandela ejwayelekile emenyezelwe ukusebenza kuyo nge isigatshana sokuqokwa. Umshwana onjalo kufanele, kodwa, uhlangabezane nemibandela ethile ngaphambi kokuba iqembu licele ukulisebenzisa ukuze libhekane nesibopho. Lapho isigatshana esinjalo sikhona ebudlelwaneni besivumelwano futhi sihlangabezana nemibandela, iphoyinti lokuqala liyasebenza.
Enye yezindlela ezaziwa kakhulu nezivamile yezikweletu zomphakathi ukuhlukunyezwa. Lokhu kufaka phakathi isenzo noma ukungenzi okwenziwe ngumuntu okudala umonakalo komunye ngokungemthetho. Isibonelo, cabanga ngesimo isivakashi sakho esingahle singqongqoze ngephutha phezu kwevase yakho eyigugu noma siphonse ikhamera yakho yezithombe eqolo. Kuleso simo, isigaba 6: 162 seDutch Civil Code sibeka ukuthi lowo ohlukunyezwe ngalezo zenzo noma okuyekwe unelungelo lokuthola isinxephezelo uma kuhlangabezana nemibandela ethile.
Isibonelo, indlela yokuziphatha noma isenzo somunye umuntu kumele kuqala kuthathwe njengokuthi akukho emthethweni. Lokhu kunjalo uma isenzo sifaka ukwephulwa kwelungelo elithile noma isenzo noma ukungenzi kuphula umsebenzi osemthethweni noma isithunzi senhlalo, noma amazinga angabhalwanga. Ngaphezu kwalokho, isenzo kufanele sibe kuthiwa 'umhlaseli'. Lokhu kungenzeka uma kungenxa yephutha lakhe noma imbangela yokuthi unesibopho somthetho noma sezimoto. Inhloso ayidingeki kumongo wokuziphendulela. Isikweletu esincane kakhulu singanele.
Kodwa-ke, ukwephulwa okubonakalayo kweleveli akuhlali kuholele kwisibopho kunoma ngubani ohlukumezeka ngenxa yalokho. Ngemuva kwakho konke, isikweletu sisengakhawulelwa yi- Isidingo sokuhlobene. Le mfuneko ithi asikho isibopho sokukhokha isinxephezelo uma indinganiso yokwephula umthetho ingasebenzi ukuvikela emonakalweni ohlaselwe yisisulu. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi 'umenzi wobubi' enze ngokungafanele 'ngakuye' ohlukunyezwe ngenxa yokwephulwa kwalelo zinga.
Uma izidingo zesikweletu senkontileka noma somphakathi ziyafezekiswa, isinxephezelo singabangwa. Umonakalo ofanele ukuthola isinxephezelo eNetherlands uyobe uhlanganisa ukulahleka kwemali futhi okunye ukulahleka. Lapho ukulahleka kwezezimali kukhathaza ukulahleka noma ukulahlekelwa kwenzuzo kuhlupheke, okunye ukulahleka kukhathazeka ngokuhlupheka okungaphatheki. Ngokuyinhloko, ukulimala kwempahla kuhlala njalo futhi kufaneleka ngokuphelele ukunxeshezelwa, okunye ukungahambi kahle kufakwa lapho umthetho unikeza ngamazwi amaningi kangaka.
Isinxephezelo esigcwele ngomonakalo sihlupheke ngempela
Uma kukhulunywa ngesinxephezelo, umgomo oyisisekelo we isinxephezelo ngokugcwele ngomonakalo ohlupheke ngempela kuyasebenza.
Le nqubo isho ukuthi umuntu olimele wesigameko esidala umonakalo ngeke abuyiselwe ngaphezulu komonakalo wakhe ophelele. Isigaba 6: I-100 yeKhodi Yezwe YaseDashi ithi uma isehlakalo esifanayo singadalelisanga ukulimala, kodwa futhi sivelisa okunye izinzuzo, le nzuzo kumele ikhokhiswe lapho kuthola ukuthi umonakalo uzonxeshezelwani, yize lokhu kunengqondo. Inzuzo ingachazwa njengokuthuthuka endaweni (yempahla) yesisulu ngenxa yomcimbi obangela ukulimala.
Ngaphezu kwalokho, lo monakalo ngeke uhlale unxephezelwa ngokugcwele. Ukuziphatha okulindelekile kohlukunyezwa yena noma izimo ezisengozini yohlukunyezwa zibamba iqhaza elibalulekile kulokhu. Umbuzo okufanele ubuzwe yilokhu okulandelayo: ngabe ohlukunyeziwe ngabe enze ngendlela ehlukile kunaleyo ayenza maqondana nokwenzeka noma ubukhulu bomonakalo? Kwezinye izimo, umuntu ohlukunyeziwe angaphoqeleka ukuba anciphise umonakalo. Lokhu kufaka phakathi isimo sokuba nesicimi sokucisha umlilo ngaphambi kwesigameko esidala umonakalo, njengomlilo, senzeka. Ingabe kukhona iphutha ohlangothini lokuhlukunyezwa? Ngaleso sizathu, yokuziphatha okungathandeki ngokwesisekelo kuholela ekunciphisweni kwesibopho sesinxephezelo somuntu obangela ukulimala futhi umonakalo kufanele uhlukaniswe phakathi komuntu obangela ukulimala kanye nomuntu ohlukunyeziwe. Ngamanye amagama: ingxenye enkulu yomonakalo ihlala ngezindleko zalowo ohlukunyeziwe. Ngaphandle kokuthi isisulu sikhokhelwe umshwalense ngaso.
Umshuwalense ngokumelene nomonakalo
Ngenxa yalokhu okungenhla, kungaba ukuhlakanipha ukuthatha umshwalense ukugwema ukusala nomonakalo njengesisulu noma imbangela yomonakalo. Ngemuva kwakho konke, ukulimala nokufuna kwalo kuyimfundiso enzima. Ngaphezu kwalokho, kulezi zinsuku ungathatha kalula izinqubomgomo zomshuwalense nezinkampani zomshuwalense, njengomshuwalense wesikweletu, umshuwalense wasendlini noma wezimoto.
Ngabe ubhekene nomonakalo futhi ufuna ukuthi umshuwalense awunxephezele ngomonakalo wakho? Ngemuva kwalokho kufanele ubike ukulimala komshuwalense wakho ngokwakho, imvamisa kungakapheli inyanga. Kungcono ukuthi uqoqe ubufakazi obuningi balokhu. Yibuphi ubufakazi obudingayo buya ngohlobo lomonakalo nezivumelwano ozenzile nomshuwalense wakho. Ngemuva kombiko wakho, umshuwalense uzokhombisa ukuthi yimuphi futhi umonakalo ozonxephezelwa futhi.
Uyacelwa uqaphele ukuthi uma ngabe umonakalo ukhokhelwe ngumshuwalense wakho, ngeke usakwazi ukuthola lo monakalo kumuntu obangele lo monakalo. Lokhu kwehlukile mayelana nomonakalo ongambozwa ngumshuwalense wakho. Ukunyuka kweprimiyamu ngenxa yokufuna umonakalo ovela kumshuwalense wakho futhi kufanelekile ukunxeshezelwa ngumuntu obangele lo monakalo.
Ngaphansi kwezimo ezithile, isenzo seklasi singaba ngenye indlela ekhangayo kwinqubo yomuntu ngamunye engenzeka. Lokhu kuzoba njalo ikakhulukazi ngomonakalo osakazwayo: inani lomonakalo elihlukunyezwe izisulu likhulu, kepha umonakalo ngamunye uhlukunyeziwe uphansi. Uma kunjalo, ukunxephezelwa okungenzeka akuvamisile ukuthi kudlule izindleko zenqubo, ukutshalwa kwemali isikhathi kanye nengozi yokuthi isisulu sigijime ukulahlekelwa. Ngaphezu kwalokho, labo ababhekele ukulimala okunjalo imvamisa izinhlangano ezinkulu ezijwayele uhlelo lwezomthetho futhi ezinemithombo yezezimali eyanele yokufaka icala.
Kusukela ngoJanuwari 1, 2020, umthetho weMass Claims Settlement Act ngokubambisana usuqalile ukusebenza. Lokhu sekwenze ukuthi kube khona amaqembu alimele, omonakalo wawo abangelwe ngumcimbi ofanayo noma imicimbi efanayo futhi okuyiwo kuphela umuntu noma inani elilinganiselwe labantu (abasemthethweni) abanecala, lokufaka isimangalo esihlanganisiwe sokuthola isinxephezelo ngeqembu elinentshisekelo. Manje kunombuso owodwa wezenzo zasekilasini ngaphansi kwesigaba 3: 305a se-Dutch Civil Code, kungakhathalekile ukuthi basebenzela isinxephezelo ngemali noma cha.
At Law & More siyaqonda ukuthi noma yimuphi umonakalo ungaba nemiphumela efinyelela kude kuwe. Ngabe ubhekene nomonakalo futhi ufuna ukwazi ukuthi ungawufuna noma ungawucela kanjani lo monakalo? Ngabe ubhekene nesimangalo somonakalo futhi ungathanda usizo lwezomthetho kwinqubo? Ngabe unelukuluku lokunye esingakwenza kuwe? Sicela uxhumane Law & More. Abameli bethu abangochwepheshe emkhakheni wezimangalo zomonakalo futhi bayakujabulela ukukusiza ngendlela yomuntu siqu neqondiswe kuyo yezeluleko nezeluleko!